R/W’ Rooble oo bogaadiyey Howlwadeennada Gargaarka Caafimaad ee la tacaalaya COVID-19 | Allbalcad Online
Home WARARKA R/W’ Rooble oo bogaadiyey Howlwadeennada Gargaarka Caafimaad ee la tacaalaya COVID-19
R/W’ Rooble oo bogaadiyey Howlwadeennada Gargaarka Caafimaad ee la tacaalaya COVID-19
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa kormeeray Xarummaha Xiriirka Dadweynaha 449 oo ka shaqeeya isku xirka shacabka, goobaha caafimaadka iyo Guddiga Naf-badbaadi ee ku howlgala xarummaha dowladdu ay u qorsheysay la tacaalidda COVID19.
“Dhalinyaro Soomaaliyeed oo isugu jira wiilal iyo gabadho ayaa ka howlgala xaruntan waxay u taagan yihiin 24ka saac sidii ay ummadda Soomaaliyeed ugu caawin lahaayeen talooyinka ay u baahan yihiin, waana uga mahadcelinaynaa kaalintaas ay buuxiyeen”.
Dhalinyarada ka howlgasha xarunta Xiriirka Dadweynaha COVID19 ayaa Ra’iisul Wasaaraha uga warbixiyey howlaha ay qabtaan, waxa ayna tilmaameen in wicitaannada ugu badan ay ka yimaadaan gobollada dalka, halka ay Caasimadda soo yaaranayaan, halka uu guddiga nafbadbaadi, usoo gudbiyeen howlaha u qabsoomay.
Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa kula dardaarmay shacabka Soomaaliyeeed in ay muujiyaan feejignaaan dheeri ah, maadaama uu xanuunku soo labo kacleeyey ayna racaan tilmaamaha caafimaad.
Previous articleWasiirka Caafimaadka oo ka warbixisay xaaladihii ugu dambeeyay ee COVID-19
Next articleSuluhu orders Information ministry to lift ban on media outlets